रेडियो ताप्लेजुङ अपहरण, फिरौती माग अनि हत्या: किन बचाउन सकेन प्रहरीले ?
अपहरण, फिरौती माग अनि हत्या: किन बचाउन सकेन प्रहरीले ?
साउन २२ गते । बलियो सुरक्षा व्यवस्था भएको भनिएको काठमाडौंमा ११ वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या भएको घटनाले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
आइतबार साँझ पेप्सीकोला टाउन प्लानिङको डेराबाट अपहरणमा परेका निशान खडकालाई सोमबार मध्यान्ह १२ बजेतिर मात्रै प्रहरीले मृत अवस्थामा फेला पार्‍यो । जबकि आईतबार राती नौ बजे अपहरणकारीले निशानकी आमा चमेलीलाई फोन गर्दै छोरा अपहरणमा परेको भन्दै ४० लाख रुपैयाँ फिरौती मागेका थिए । त्यसलगत्तै परिवार प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेको थियो ।
समयमै प्रहरीले सूचना पाए पनि अपहरणकारीको पञ्जाबाट निशानलाई किन मुक्त गराउन सकेन रु
महाशाखाले भने पाँचरपाँच जनाको चार टोली परिचालन गरेको थियो । सामान्यतया अपहरणको घटनामा अपहरणकारीलाई प्रहरीको गतिविधिबारे थाहा नदिन कोभर्ट ९प्रहरीले भेस बदलेर गोप्य रूपमा गर्ने० अप्रेसन गर्ने गरिन्छ । तर आइतबारको अपहरणको घटनामा परिसर र महाशाखा दुवैले आफू मातहतमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको थियो । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सुचना साटासाटको प्रणाली नहुँदा अप्रेसन प्रभावकारी नभएको बताए ।
महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख धिरजप्रताप सिंहलाई हामीले सोध्यौं, ‘अखिर किन प्रहरीले निशानलाई बचाउन सकेन रु’ एसएसपी सिंहको अनुभवमा पेशेवर अपहरणकारीभन्दा आफन्त र चिनेजानेकाबाट हुने अपहरणको घटनामा अपहरितको हत्या गरिने सम्भावना अधिक हुन्छ । ‘अपहरितले अपहरणकारीलाई चिनेको हुनाले घटना सार्वजनिक हुने डरले हत्या गर्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘परिचतबाट हुने अपहरणका अधिकांश घटनामा अपहरितलाई बचाउन सकिन्न ।’
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोली आ९आफ्नै शैलीमा निशानको खोजीमा जुटेको थियो । परिसर टोलीले निशानलाई धुलिखेलतिर पुर्‍याएको सुचनासमेत पाएको थियो । महाशाखाको टोली भने अपहरणकारीको लोकेशन खोज्नमा लागिपरेको देखिन्छ । निशानको शव फेला परेलगत्तै महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखाले अपहरणपछि बच्चाको हत्या गरेर भागेका दुई जना मुठभेडमा मारिएको विज्ञप्ती जारी गरीसकेको थियो ।
४० लाख लिएर आउनु । प्रहरीलाई खबर नगर्नु,’ सोमबार बिहान अपहरणकारीको खोजी भईरहेका बेला कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा चमेलीले अघिल्लो साँझको घटना सुनाईन् । उनको स्वर रुँदारुदै थाकेर भास्सिएको थियो । ‘खै के पो हुन्छ होला,’ उनले आत्तिएको स्वरमा सोधिन, ‘के हुन्छ होला रु’
चमेली मिनेट मिनेटको हिसाब गरेर छटपटीमा समय कटाईरहेकी थिईन । सोमबार बिहानको कुराकानीमा चमेलीले छोरा अपहरणको कुरा मलेशिया रहेका श्रीमानलाई नभनेको बताउँदै थिईन् । उनले दबेको स्वरमा भनिन, ‘कसरी पो भन्नु । थाहा पाउनुभो भने के होला रु’
एकैछिन अघि आएर प्रहरीले चमेलीलाई लिएर गएको उनैले बताएपछि थाहा भयो । चमेलीलाई लिएर जानेबित्तिकै दर्के झरी परेको थियो । मिनको फोन किर्र९किर्र बजिरहेको थियो । उनी फोनमा अडकलेर बोलीरहेका थिए । उनी फोनमै कसैलाई सम्झाईरहेका थिए, ‘नरो त । पिर नगर भन्या ।’ यति भनेर फोन राखेपछि उनले आँखाको डिलमै आएर अडिएको आँसु हर्थुङगोले पुछे ।
अपहरणपछि फिरौती माग गर्ने र घटना सार्वजनिक हुने डरले अपहरितको हत्या गर्ने आपराधिक प्रवृत्ति काठमाडौंमा देखिने गरेको छ । प्रहरी सक्रियता र सिसिटिभीको व्यापकताका पछि राजधानीमा अपहरणका घटना न्युन भईरहेका थिए । आर्थिक बर्ष २०७०र७१ मा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी ९ घटना भएका थिए ।
काठमाडौंका निम्ती आर्थिक वर्ष २०७१र७२ अपहरणशुन्य बर्ष थियो । आर्थिक बर्ष २०७२र७३ मा अपहरणको संख्या ४ पुगेको थियो भने त्यसपछिको बर्ष अर्थात् आर्थिक बर्ष २०७३र७४ मा दुईवटा अपहरणका घटना भएका थिए । पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७४र७५ मा भने अपहरणको एउटा मात्रै घटना भएको देखिन्छ ।
सोमबार भएको अपहरण र हत्याको घटनाले भने प्रहरीलाई पनि झस्काइदिएको छ । अनुसन्धानमा संग्लन एक प्रहरीका अनुसार अपहरणको घटना व्यवसायिक आपराधिक समूहबाट भएको देखिन्न । जसबाट नितान्त छिटो पैसा कमाउने र धनी बन्ने सपनाबाट प्रेरित भएर अपहरण गरेको देखिन्छ । अपहरणपछि समयमै रकम नपाउने र अपहरित बच्चाले आफूहरुलाई चिन्ने भएपछि उनीहरुले हत्या गरेको हुनसक्ने अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको बुझाई छ । स्रोतःई कान्तिपुर